कूल संक्रमितको संख्या १५ हजार पुग्दा एकैदिन सर्वाधिक ७४० जनामा कोरोना संक्रमण « Mechipost.com
कूल संक्रमितको संख्या १५ हजार पुग्दा एकैदिन सर्वाधिक ७४० जनामा कोरोना संक्रमण
प्रकाशित मिति: १९ असार २०७७, शुक्रबार १७:०८
फिदिम । नेपालमा विगत २४ घण्टामा थप ७४० जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि हो । यससँगै शुक्रवार अपराह्नसम्म देशभरि पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या १५,२५९ पुगेको छ ।
तीमध्ये ६,१४३ जना निको भएका र ३२ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार विगत २४ घण्टामा ८२३ सङ्क्रमित भाइरसमुक्त भएर घर फर्किएका छन् भने असार १७ मा मृत्यु भएका एक व्यक्तिमा पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ ।
अहिलेसम्म प्रदेश नं ५, प्रदेश नं २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोभिड–१९ भएका व्यक्तिको सङ्ख्या सर्वाधिक छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ ।
बिहीवार मन्त्रालयले ४७३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि गरेको थियो भने एकै दिन सर्वाधिक ६६४ जना भाइरसमुक्त भएर घर फिर्ता भएका थिए । यसअघि गत असार ४ गते एकै दिन सर्वाधिक ६७१ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो ।
अहिले सबै ७७ वटा जिल्लामा कोभिड–१९ पुगिसकेको छ । आइसोलेशनमा भएका सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९,०८४ छ । महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, कपिलवस्तु, पाल्पा, दाङ, दैलेख र कैलाली जिल्लामा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ५०० नाघेको छ ।
निको भएकाबाहेक अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सर्वाधिक २,८४९ सङ्क्रमित छन् भने प्रदेश नं ५ मा २,१५७ र प्रदेश नं २ मा २,१२४ जना छन् । विभिन्न जिल्लामा ३५,००० भन्दा बढी व्यक्ति क्वारन्टीनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टामा ४,४८३ वटा नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो । यससँगै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि गर्न प्रयोग हुने उक्त परीक्षणको सङ्ख्या २,४२,२४७ पुगेको छ ।
क्वारन्टीनमा भएका मानिसको परीक्षणमा तीव्रता दिइएकाले सङ्मितको सङ्ख्या बढेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । डा. गौतमका अनुसार शुक्रवारबाट परीक्षणको दायरा अझ फराकिलो बनाइएको छ ।
उनका अनुसार अब क्यान्सर तथा मधुमेह भएका बिरामी, इमर्जेन्सीमा आउने बिरमाी, आइसीयूमा भर्ना भएका बिरामी, पकेट एरियाम बस्ने मानिस र स्वास्थ्यकर्मीहरूमा परीक्षण हुनेछ ।